အချစ်နဲ့အမုန်းချစ်တယ် ကြိုက်တယ်ဆိုပေတယ်လို့ သေအောင်ပင် ဆုတောင်းကြောင်းဆုံမှပေါင်း။မုန်းတယ် မုန်းတယ်ဆိုပေတယ်လို့ သေအောင်ပင် ကျိန်ဆဲကြောင်းဆုံမှ ကွဲ။Love and HateI love you, I care for you,However we sayAnd pray till we die,Only when we are destined to be soShall we be united in wedlock.I hate you, I do hate you,However we sayAnd curse till we die,Only when we are fated soShall we be separated.Translated By Maung Thar Noe
Wanted ဆိုလို့ ဘာဖြစ်တာလဲ လို့လန့် မသွားပါနဲ့ ။ Forword ပို့ တဲ့ အီးမေးတွေ ရောက်လာလို့စိတ်ဝင်စားသူတွေ လျှောက်လို့ရအောင် ဒီမှာပိုစ့် ပေးလိုက်တာ.. သူငယ်ချင်းတွေထဲက စိတ်ဝင်စားသူတွေ သွားလျှောက်ကြပေါ့...Role of Burmese Male in Rambo4- In The Serpent's EyeFilm - RAMBO 4: IN THE SERPENT'S EYE (Role of Burmese Male) Thailand/California , Feature FilmProducer: Sylvester Stallone, Kevin King, John ThompsonWriter / Director: Sylvester StalloneCasting Director: Sheila JaffeAssoc. Casting Director: Susan Paley AbramsonStart Date: January 2007, ThailandSUBMIT ELECTRONICALLY (FREE registration for electronic submissions at: http://www.actorsaccess.com - Actors Access)ATT: SUSAN PALEY ABRAMSONRAMBO: CAST (SYLVESTER STALLONE)We are looking for real Burmese or of Burmese descent. Please note if you are familiar and/or can speak the language. You do not have to be union for this part.BURMESE MALE - 32-40. Military Man. Character Face. Unlikeable...Do not submit other asian ethnicities!!! We are strictly looking for burmese people. (not Thai, not Korean, not Vietnamese, not Chinese)STORY LINE:While working asasnake hunter in Thailand, Rambo is hired byagroup of pacifist Christian missionaries to deliver medical and religious supplies to the persecuted Karen people of Burma. After the missionaries are killed or captured, Rambo getsasecond impossible job: to deliverateam of mercenaries to the same place and retrieve the surviving missionaries...
စိတ်ဝင်စား စရာပါပဲ။ Enterprise level web application development ပိုင်းမှာ ဘာတွေ ပြောင်းလဲ မှု တွေ့ဖြစ်မလဲ။ OpenSource တွေကလည်းများလာတော့ ဘာဟာက ပိုအားကောင်းလားမလဲ မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပိုင်းဆို Ruby က Web Application မှာနေရာယူလာပြီး၊ Enterprise level မှာတော့ Java ကဆက်ရှိနေမယ့် အလားအလာတွေ မြင်နေရတယ်။Java က OpenSource လုပ်လိုက်တော့ Enterprise level ပိုင်းမှာ ပိုနေရာရ ပိုကောင်းလာမယ့် ပုံစံရှိနေပါတယ်။ ခုချိန်မှာ Web development ပိုင်းမှာ PHP က အဓိက အသုံးများနေပေမယ့်.. နောင်ဆို Ruby က PHP ကိုကောင်းကောင်း ယှဉ်နိုင်လာပြီး၊ တစ်ချိန်ချိန်ကြရင်တော့ ကျော်တက်သွားမှာမယ့် အလားအလာတွေ ရှိနေတယ်။ ကျွန်မ မြင်သလောက်ကတော့ အားလုံးခြုံကြည့်ရင် OpenSource လောကမှာ Java နဲ့Ruby က Mainstream languages တွေဖြစ်နေမယ် ထင်တယ်။ SUN က JRuby ဆိုပြီး Ruby ကို JVM ပေါ်မှာ run လို့ရအောင်လုပ်နေတယ် လို့ သိရတယ်။ နောက်တချိန်မှာ Ruby ကနေ Java Library Files တွေ အားလုံးကို ခေါ်သုံးနိုင်အောင် SUN က ကြိုးစားတဲ့ အနေနဲ့JRuby ကို လုပ်နေတာပါ။ ဘယ်တော့ ဖြစ်လာမလဲ တော့ မသိရသေးဘူး။ အဲ့ဒီ JRuby က Ruby နဲ့100% compatable ဖြစ်မယ်ပြောတယ်။ တလောကတင် Microsoft ကလည်း Canada က .net developer တစ်ယောက်ကိုငှါးပြီး Ruby ကို CLR ပေါ်မှာ run လို့ရအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်း ဖတ်လိုက် ရသေးတယ်။ တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်သူ အရင်ပြီးမလဲ ၊ ဘာက ပိုကောင်းမလဲတော့ မသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Ruby က HOT နေတာတော့ အမှန်ပဲ။နောက်ဆို Linux , Java နဲ့Ruby က တစ်ဖက်၊ Windows, .net(C#,VB.net,ASP.net)က တစ်ဖက် ဖြစ်လာမှာပဲ။ ဘာပဲ ဖြစ်နေနေ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ Java ကိုတော့ ခုချိန်မှာ စွန့် လွတ်လို့ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ။ ဒီမှာတော့ ဒီနေ့ဖတ်မိတယ့် သတင်းလေးပါ..According to "Open Java changes Everything," on O'Reilly:In the medium term (between6and 24 months) expect some interesting packagings of Java to emerge, similar to the way the various Linux Distros work today.Java will become more like .Net with multiple languages running in the standard JVM. We have JRuby and Groovy. It wouldn’t be too hard to add C# to this list.Oracle, IBM, SAP and others already committed to the Java market will become focussed on Java as an even bigger part of the core strategy. Just like the app server market, each will seek to differentiate themselves, perhaps by Service (IBM), byacore database (Oracle) or by leadinganiche (SAP). Expect tension between the desire to differentiate (and fragment) and the GPL which seeks to 'bind them all.'Microsoft .Net will end up ina'death march' with Java trying to gainalead inafeature set. Open source is very goodamimicking existing products (as it makes an easy spec for dispersed developers to write on - just look at Open Office), so (unless software patents get thrown into the mix), it's hard to see .Net gettingafundamental and lasting edge over the Java Ecosystem.Source : TheServerSide , OreillyNet
မနေ့ က အကိုဝမ်းကွဲ တစ်ယောက် ဒီကိုလာလို့အမေက စားစရာတွေ အများကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ပေးလိုက်တဲ့ အထုတ်က သယ်လာတဲ့ တော့ ဘယ်လို နေမလဲ မသိဘူး၊ သွားယူရတဲ့ ကျွန်မ အတွက်ကတော့ တော်တော်လေးတယ်။ ဘာလိုလိုနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ အမျိုးတွေ တော်တော်များနေပြီ။ မနေ့ က လာတဲ့ အစ်ကိုဆို ငယ်ငယ်ကသာ မြင်ဘူးတာ၊ ကြီးလာမှ ကောင်းကောင်း မတွေ့ဖူးဘူး။ များလိုက်တဲ့ ၀မ်းကွဲ အကိုတွေ မောင်တွေ။ ဘယ်တော့မှ အမ ၀မ်းကွဲ၊ ညီမ ၀မ်းကွဲ အကြောင်းပြောသံ သိပ်မကြားရဘူး။ ကိုယ့်အမျိုးက မိန်းကလေးရှားပြီး၊ ယောက်ျားလေးတွေ များတယ်ဆိုတာကို ခုမှ သိတော့တယ်။ တစ်ခုရှိတာက ခုဒီမှာ ရောက်နေတဲ့ အမျိုးတွေက ကျွန်မကို ကောင်းကောင်း သိနေတယ်၊ ကျွန်မကတော့ သူတို့ ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ ရင် တောင် ကိုယ့်အမျိုးမှန်း ချက်ချင်း မှတ်မိမယ် မထင်ဘူး။ ဒုက္ခပါပဲ ကျွန်မကသာ အိမ်ကို မှန်မှန် ဖုန်းဆက်လေ့ မရှိတာ၊ အဲ့ဒီ အကိုတွေ မောင်ဝမ်းကွဲတွေက သူတို့ရဲ့လေးလေး၊ ကျွန်မရဲ့ မေမေစီကို ပုံမှန် ဖုန်းဆက်ကြတယ်။ နောက်ဆို City Hall သွားရင်တောင် ဒီလူတွေ ဘယ်လို ရှောင်ရမလဲ မသိတော့ဘူး။ ကိစ္စတော့ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ကလည်း ဘယ်တော့မဆို သူတို့ သိလောက်တဲ့ အကြောင်းအရာ လုပ်ထားတယ်ဆို သူတို့ အရင် အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပြော ထားတတ်တဲ့ အကျင့်က ရှိပြီးသားပဲ။ မနေ့ က အဲ့ဒီ အကိုနဲ့MRT မှာ တွေ့ ပြီး ပစ္စည်းတွေသာ ယူလိုက်တာ၊ သူ့ ရုပ်ကိုတော့ ကောင်းကောင်းမကြည့် မလိုက်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မေမေက ဟိုနေ့ က အိမ်ကို ဖုန်းဆက်တုန်းက ဘာစားချင်လဲ မေးတာနဲ့စိတ်ထဲရှိတာ၊ စားချင်တာတွေ လျှောက်ပြောလိုက်တာကို အကုန်ပါအောင် ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ အင်း ဒီရက်ပိုင်းတော့ ညစာကို အပြင်မှာ စားဖြစ်တော့မယ် မထင်ဘူး။ အကုန်အကျ သက်သာတာပေါ့။ မဟုတ်ရင် ညဖက် ဟင်းချက်ရမှာ ပျင်းတာနဲ့အပြင်မှာပဲ ၀ယ်စားဖြစ်နေတာ ကြာပြီ။ ဘာပဲ ပြောပြော ဒီရက်ပိုင်းတော့ အမေ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ၀က်သားထောင်ကျော်လေးရယ်၊ ပုဇွန်ခြောက် ထောင်းကျော်လေးရယ်၊ ငါးပိကျော် စပ်စပ်လေးရယ်၊ ပုဇွန်ထုတ်ဆီပြန် ချက်ထားတာလေးရယ်၊ ငါးပိထောင်းလေးရယ်၊ ငါးသလဲထိုးကျော်လေးရယ်၊ လက်ဖက်တွေ နဲ့ထမင်းစားလို့ ကောင်း နေတယ်။ ငသလောက်ဥကျော် နဲ့ဝက်နံရိုးကျော် မှာလိုက်ဖို့ ဟာ မေ့သွားတယ်။ ငသလောက်ဥက အရင် စားစရာပို့တိုင်းပို့ နေကြ ဆိုတော့ ဒီတစ်ခါ ၀ယ်မရလို့ ပဲ ထည်းမပေးလိုက်တာလား၊ မမှာလို့ ဆိုပြီး ထည့်မပေး လိုက်တာလား မသိဘူး။ မပါလာလို့ လားမသိဘူး စားချင်လိုက်တာ။ အင်း… နောက်တစ်ခေါက်တော့ မှာဖြစ်အောင်မှာလိုက်ဦးမယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာနေရတာ တခြားဟာတွေ မကြိုက်ပေမယ့် ဒီလို လူကြုံပေါပြီး၊ စားချင်တာ အိမ်ကမှာ စားလို့ ရတာ ကိုတော့ သဘောကျမိသားပဲ။
11/28/2006 05:50:00 PM
စပါးရွှေဝါ ၀င်းပါစေပန်းတွေသင်းပါစေ။ငှက်ကလေးတွေ မိုးတိမ်ကြားပျံနိုင်ကျစေသား။နေရောင်ချည်လည်း ဖွေးပါစေလေပြည်အေးပါစေ။ချစ်မိတ်ဆွေ ပေါင်းဖေါ်များကျန်းမာကြစေသား။ကျွန်မတို့သူငယ်တန်းမှာ သင်ရတဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ ကျွန်မ ကလေးကဗျားလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားပြီး၊ ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ ကြားခဲ့ရတဲ့ ကဗျာတော်တော်များများကို မှတ်မိနေသေးတယ်။ ဒီနေ့ လည်း နေးတစ်ဖိုရမ်မှာ ငယ်ငယ်က သင်ကြားခဲ့ရတဲ့ မှတ်မိသလောက် ကဗျာလေးတွေထဲကို ပြန်ရေးနေရင်း ဒါလေးရဲ့ အဓိပါယ်လေးကို သဘောကျသွားမိတယ်။ အားလုံး ကျန်မာ ပျော်ရွှင် ကြပါစေ။
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော် နားထောင်ကြည့်ဆိုပြီး ကိုဇာနည်ပို့ ပေးခဲ့တဲ့ အချိန်က စပြီး၊ ခုချိန်ထိ အမြဲ နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ဒီသီချင်းက ကော်ပီသီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ မူရင်း Title က Treasure the World ပါ။ ဒီသီချင်းဟာ ASIAN-JAPAN EXCHANGE 2003 / J-ASEAN POPs အတွက် သီချင်းဖြစ်ပြီး၊ English နဲ့Japan Version ကို Chika Yuri ကသီဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီသီချင်းရဲ့ Melody ကို Kazufumi Miyazawa ကဖန်းတီးခဲ့ကာ English Lyrics ကို Dick Lee ကရေးစပ်ပြီး၊ Japan Lyrics ကိုတော့ Taeko Onuk ကရေးခဲ့တာပါ။ ကျွန်မတို့Myanmar လိုကိုတော့ ကိုမြင့်မိုးအောင်က ရေးပြီး Iron Cross က တီးခပ်ကာ လေးဖြူက သီဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီသီချင်းကို တစ်ခြား Asia နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Viet Nam) တွေကလည်း သူတို့ ဘာသာစကားတွေနဲ့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီ တခြား Versions တွေ နားထောင်ဘူးတဲ့ ZNMT နဲ့THKZ ကတော့ အားလုံးထဲမှာ မြန်မာ Version က အကောင်းဆုံးလို့ပြောပါတယ်။ ဒါပေ့မယ် တစ်ခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ သီချင်းတွေမှာ သူတို့ နိုင်ငံဂီတရဲ့ ရိုးရာ music style တွေပါတယ်လို့ ပြောပါသေးတယ်။ ဒီမြန်မာ သီချင်းကတော့ အနောက်တိုင်းဟန် ဆန်ပြီး၊ ကော်ပီကူးတဲ့ အတွေ့ အကြုံများပြားတဲ့ အတွက်ကြောင့် တခြား Versions တွေထက်သာလွန် ပိုကောင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။Treasure The World - Lay PhyuSong By: Lay Phyu & Iron CrossSong Title : အလှဆင်လိုက်ပါ ဒီကမ္ဘာMyanmar Lyrics: Myint Moe Aungအိမ်အပြင်ဘက် လှမ်းထွက်ချိန်၊ နေရောင်အလင်း ရောက်ရှိလာနေ့ ကောင်းကင် ဒီလက်ဆောင်၊ ပျော်စရာ ကမ္ဘာ တို့ အတွက်လားအတူတူ တစ်မိုးထဲ အောက်မှာ၊ ဝေမျှခြင်း ချစ်မေတ္တာကမ္ဘာကြီးကို အတူအလှဆင်၊ တို့ အချစ်များသန်းကောင်ယံထဲ လမ်းပျောက်ချိန်၊ ကြယ်ရောင်အလင်း ရောက်ရှိလာညကောင်းကင် ဒီလက်ဆောင်၊ အမှောင်တွေပယ် ခွင်းဖို့ လားအတူတူ တမိုးထဲ အောက်မှာ၊ ဝေမျှခြင်း ချစ်မေတ္တာကမ္ဘာကြီးကို အတူအလှဆင်၊ တို့ အချစ်များcho : ဒီလယ်ကွင်းနဲ့တောအုပ်တို့ ဖြတ်ကျော် ချစ်မေတ္တာရဲ့သီချင်းမြစ်ရိုးများ တလျှောက် လေဆန်ကျော်လွန်ရင်းမာန်ပြင် ပင်လယ်ရေပြေလှိုင်းများနဲ့မိုးစက်တွေဖြတ်လို့ ကမ္ဘာဆုံးတိုင် ဟစ်ကြွေးရင်းပျော်ရွှင်ခြင်း သီချင်းများစွာ၊ လေပြည်ထဲ ပျံ့လွင့်လာအိပ်မက်တွေ အတူမက်ကာ၊ ရင်ခုန်သံ နားစွင့်ထားရှင်သန်ခြင်း နေ့ သစ်ကမ္ဘာ၊ အတူလက်တွဲ ခရီးဆက်မှာကမ္ဘာကြီးကို အတူအလှဆင၊် တို့ အချစ်များcho : ..ပျော်ရွှင်ခြင်း သီချင်းများစွာ၊ လေပြည်ထဲ ပျံ့လွင့်လာအိပ်မက်တွေ အတူမက်ကာ၊ ရင်ခုန်သံ နားစွင့်ထားရှင်သန်ခြင်း နေ့ သစ်ကမ္ဘာ၊ အတူရင်ဆိုင် ခရီးဆက်ပါ..ဒီ ကမ္ဘာကြီး အလှဆင်ပါ… တို့ အချစ်များ…ဒီ ကမ္ဘာမြေ လှပဖို့ ... တို့အချစ်များ…Thanks to ZNMT and THKZ
11/26/2006 02:14:00 AM
ဒီနေ့သောကြာနေ့ ဆိုတော့ နောက်ရက်တွေ အားပြီး အလုပ်လည်းသွားစရာမလို တော့ဘူးဆိုတော့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် နဲ့dinner သွားစားဖြစ်တယ်။ မြို့ ထဲကို မရောက်တာ ကြာပြီဖြစ်လို့လူတွေအများကြီကို တွေ့ ရတာ၊ X’mas အတွက် ပြင်ဆင်ထားတာတွေ တွေ့ ရတာတွေ မျက်စိထဲမှာ အထူးအဆန်းဖြစ်နေသလိုပဲ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် နောက်ကျနေတာနဲ့ရောက်နေတဲ့ တစ်ရောက်နဲ့ ဈေးဆိုင်တွေ ခဏ လျှောက်ကြည့် ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ နောက် တစ်ယောက်ရောက်လာမှ ပဲ dinner သွားစားဖြစ်တယ်။ သုံးယောက်သား ဗိုက်ဆာဆာ နဲ့ အ၀ စားပြီး (သူတို့ နှစ်ယောက် ၀ မ၀တော့ မသိဘူး၊ ကိုယ့်ဟာကိုတော့ ၀အောင်စားလိုက်တယ်) စကားခဏပြော ပြီးတော့ ပြန်မယ်ဆိုပြီး လမ်းလျှောက်လာကြတာ လမ်းမှာ လက်ကမ်းကြော်ငြာတစ်ခုရလို့ကြည့်လိုက်မှ ဒီနေ့ညဟာ Late Night Shopping ညမှန်း သိလိုက်ရတာနဲ့သုံးယောက်သား အိမ်ပြန်ဖို့စိတ်မ၀င်စားကြတော့ ပဲ Shopping လျှောက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး သွားလိုက်တာ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်ကြတော့ ည ၁၂ ခွဲခါနီးရှိနေပြီ။ မှတ်မှတ်ရရ ပေါ့။ ဒီရောက်တာသာကြာနေပြီ ဒီနိုင်ငံမှာ တချို့အချိန်တွေမှာ Late Night Shopping ဆိုပြီး ရှိတယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် တစ်ခါမှ ညဖက် shopping မသွားဖြစ်ဖူးဘူး။Late Night Shopping ဆိုတာလာလဲ။ ပုံမှန်ဆို ဒီမှာ ဆိုင်တွေက ၉ နာရီလောက်ဆို ပိတ်လေ့ရှိပေမယ့် အဲ့ဒီညဆို ၁၂ နာရီအထိ တချို့ ဆိုင်တွေဖွင့်ကြတယ်။ ည ၉ နာရီနဲ့၁၂ နာရီကြားမှာ ၀ယ်ရင် အဲ့ဒီ ဆိုင်တွေမှာ Special Discount တွေ ရှိတယ် လို့ရေးထားတာကို ဖတ်လိုက်ရတာပဲ။ မနေ့ က ရတဲ့ ကြော်ငြာထဲမှာ ရေးထားတာတော့ Late Night Shopping က့ Last Friday Of Every Month မှာ ရှိတယ်လို့ပြောတာပဲ။ Internet မှာရှာကြည့်လိုက်တော့ ဒီဟာက လွန်ခဲတဲ့ July က နေပြီး ၄ လ အတွင်း EveryMonth of Last Firday Night မှာ လုပ်ရှိမယ်ပြောထားတာတွေ့ ရတာ့ ဒီညက နောက်ဆုံးညပေါ့။ ဒါပေမယ့် မနေ့ကတော့ တွေ့ ရတာ December လမှာလည်း Late Night Shopping Days တွေရှိသေးတယ်။ Shopping သွားချင်သူတွေ သွာလို့ ရအောင် Information လေးပေးလိုက်ဦးမယ်..Come December, Late Night Shopping will be extended to come shopping malls in the Orchard Road and Marina Bay Areas:Malls at Marina Bay on 8,9, and 16 DecemberMalls at Orchard on 15,16,22 and 23 Decemberဒီနေ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင် ၀ယ်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောင်နှစ်တွေလည်း ဒီလရောက်တိုင်း လခတိုးပြီး လက်ဆောင်တွေ များများ ၀ယ်ပေးနိုင်ပါစေ။
Thanksgiving ဆိုတာ နိုဝင်လာလရဲ့ နောက်ဆုံး ကြာသာပတေးနေ့ ။အဲ့ဒီနေ့ က ဘာနေ့ လည်း၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလည်း သေချာမသိပါဘူး။ သိချင်တဲ့သူများ Wiki - Thanksgiving မှာဖတ်လို့ ရတယ်။ Google လုပ်လိုက်လဲရတယ်လေ။ ထားပါ... ခုကျွန်မသိတာ တစ်ခုကို ရေးချင်လို့ ။ ဘာလည်းဆိုတော့ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာ အဲ့ဒီနေ့ က အလုပ်ပိတ်ရက်တဲ့။ ဒါနဲ Thanksgiving ဆိုတဲ့နေ့ ကို ကျွန်မသဘောကျသွားတယ်။ တစ်ခြားအကြောင်းလည်း ရှိတာပေါ့။ Thanks giving ဆိုတဲ့ နာမည်ကလေးကိုလည်း နှစ်သက်မိတယ်။ ခုကျွန်မရှိနေတဲ့ နိုင်ငံမှာတော့ အဲ့ဒီရက်က အလုပ်ပိတ်ရက်မဟုတ် ပါဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှတင် မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်မနေဘူးတဲ့ နိုင်ငံတွေ အားလုံးမှာ အဲ့ဒီနေ့ က အလုပ်ပိတ်ရက် မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ အင်း.. အဲ့ဒီနေ့အလုပ်ပိတ်တဲ့ ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ နေချင်မိတယ်။ နောက်နှစ်တော့ အဲ့ဒီနေ့အလုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံကို အဲ့ဒီအချိန်မှာ ရောက်အောင်သွားဖို့ကြိုးစား ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
11/24/2006 09:42:00 AM
Birthday BlessingsInstead of counting candles,Or tallying the years,Contemplate your blessings,As your birthday nears.Consider special peopleWho love you, and who care,And others who’ve enriched your lifeJust by being there.Think about the memoriesPassing years can never mar,Experiences great and smallThat have made you who you are.Another year isahappy gift,So cut your cake, and say,"Instead of counting birthdays,I count blessings every day!"By Joanna Fuchsဒီကဗျာလေးကို မွေးနေ့ ဆုတောင်းအနေနဲ့ ရတာပါ။ ကြိုက်လို့ အမှတ်တရ ဒီမှာမှတ်ထားလိုက်တာ။ မွေးနေ့ မှာ ဖုန်းဆက်ပြီး ဆုတောင်းပေးတဲ့ အပြင် ဒီကဗျာလေးပါ ပို့ ပေးတဲ့ မ TDO ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မွေးနေ့ ကို အမှတ်ရပြီး ဖုန်းဆက် ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ sms ပို့ ပြီး ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ အီးမေးပို့ ပြီး ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မွေးနေ့ဆုတောင်းကတ်ပို့ ပြီး ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့နေးတစ် ဖိုရမ်က သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
11/22/2006 11:35:00 PM
အချိန်မှီသာပြင်ဆင်ခွင့်မရှိခဲ့ရင် - မျိုးကြီးဒီသီချုင်းလေးက တော့ အချစ် အကြောင်းရေးထားတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ တကယ်တော့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က တချိန်ချိန်မှာ အရင်းနှီးဆုံး လူသားနှစ်ယောက် ဖြစ်ကြဖို့ ပါ။ ခုတော့ ချစ်သူနှစ်ယောက် ကြားဆက်ဆံရေးမှာ တစ်စုံတစ်ခု မှားနေတယ်၊ ဒီ အမှားလေးကို သိပြီး၊ အချိန်မှီသာပြင်ဆင်ခွင့်မရခဲ့လိုက်ရင် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အရင်းနှီးဆုံးတွေဖြစ်မလားပဲ၊ အဝေးဆုံးကို ရောက်သွားကြမယ်ဆို တဲ့ အကြောင်းလေး ရေးထားတာပါ။ဒီသီချင်းလေး နားထောင်ပြီး ကျွန်မ လူတွေ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အမှားဆိုတာတွေ အကြောင်းတွေးမိတယ်။ ကျွန်မကို လူတစ်ယောက်က ငါက ဘယ်တော့မှ မမှားခဲ့ဖူးဘူး၊နောင်လည်း ဘယ်တော့မှ မှားမှာ မဟုတ်ဘူး လို့လာပြောမယ်ဆို ၊ ကျွန်မကတော့ ဒီလူဟာ တစ်စုံတစ်ခု မှားယွင်းနေတယ်လို့ထင်မိမှာပဲရှင့်။ တခါတလေ ကိုယ်ကမှားလို့မှားနေမှန်းမသိ ဖြစ်နေတာ သာရှိချင် ရှိမယ်၊ အမှားကြီးကြီးမားမားတွေ မလုပ်ခဲ့သေးတာသာ ရှိချင် ရှိမယ်၊ လောကမှာ အမှား လုံးဝ မလုပ်ဘူးခဲ့ဘူးတဲ့ လူဆိုတာ မရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်မထင်တယ်။ နောင် အမှား လုံးဝ မလုပ်ပါဘူးဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ လူမှန်ရင် အမှားနဲ့မကင်းနိုင်ကြပါဘူး။ အမှား မလုပ်မိအောင်ဆိုတာ ဘာမှ မလုပ်ပဲ နေရင်တောင် မရနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ လူဖြစ်ပါရဲ့ ဘာမှ မလုပ်ပဲ နေတယ်ဆိုကတည်းက ဒီလူဟာ တစ်စုံတစ်ခုတော့ မှားနေတာပဲပေါ့။တစ်စုံတစ်ယောက်က အမှားတစ်ခု လုပ်မိတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့သိခဲ့ရင် အဲ့ဒီလူကို ချက်ချင်း အပြစ်တင်၊ ရှုံ့ချ ဖို့ မကြိုးစားပဲ ဒီလူ ဘာကြောင့်၊ ဘာလို့ဒီအမှားကို လုပ်မိတယ် ဆိုတာမျိုးကို အရင်လေ့လာသင့်တယ် ထင်မိတယ်။ တကယ်ဆို တချို့ လူတွေက မသိလို့အဲ့ဒီ အမှားဆိုတာကို လုပ်မိကြတာပါ။ တခိ်ျု့လူတွေ ကြတော့လည်း မှားမှန်း သိသိကြီးနဲ့မှားပစေဆိုပြီး တမင်လုပ်ကြတယ်ပေါ့လေ။ သိသိကြီးနဲ့အမှားကို ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်သူများကိုတော့ ကျွန်မ ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ကြိမ်တစ်ခါ မသိလို့မှားမိသူတွေကို့အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားခွင့်လွတ် သင့်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။ တကယ်ဆို ကိုယ်လည်း သူ့ လို မသိပဲ မှားခဲ့တဲ့ အမှားတွေက နည်းတာမှ မဟုတ်တာ။ကျွန်မတို့ တွေ ကလေးဘ၀ကနေ ခုချိန် အထိ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မှားခဲ့ကြတယ်။ မှားနေကြတယ်။ နောင်လည်း မှားကြဦးမှာပဲ။ အဲဒီ အမှားဆိုတာကို ကျွန်မတို့လုံဝ မလုပ်မိအောင် ရှောင်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပေဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ကြတဲ့ အမှားတစ်ခုကိုတော့ နောက်အကြိမ် ထပ်ခါထပ်ခါ မလုပ်မိအောင်တော့ ရှောင်လို့ရနိုင်တယ်။ ဒါက ကိုယ့်လုပ်ဖူးတဲ့ အမှားကနေ သင်ခန်းစာ ပြန်ယူတဲ့ သဘောပေါ့။တချို့ကတော့ ပြောကြတယ်၊ ငါမမှားမခြင်း လုပ်ချင်တာလုပ်နေဦးမှာပဲတဲ့။ ကိုယ်တိုင် တစ်ခါလောက် မှားပြီးမှ နောင်တရ၊ အမှားပြင်၊ နောက်ထပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောလား။ ဒါလည်း အဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အမှားဆိုတာ ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပေမယ့် တခြားသူတွေ ကြုံတွေကြ၊ လုပ်မိကြတဲ့ အမှားတွေကို ကြည့်ူပြီး ကိုယ်လည်းသူတို့ လို အမှားမျိုးတွေ မလုပ်မိအောင် ကြိုးစားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အမှားကတင်မဟုတ် သူ့ များအမှားကပါ ကိုယ်ယူတတ်ရင် သင်ခန်းစာ ယူလို့ ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ အရာရာတိုင်းကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့် ပြီးမှ မှားခဲ့ရင် သင်ခန်းစာယူ နောင်မမှားအောင်လုပ်ကြမယ်ဆို ကျွန်မတို့ဘ၀တွေက နဂိုက အမှားများရတဲ့ အထဲ မှားပြီးရင်း ဆက်မှားနေတော့မှာပဲပေါ့။ကျွန်မလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ အမှားပေါင်းများစွာ၊ ကျွန်မမြင်တွေ့နေရတဲ့ အမှားလုပ်သူတွေ.. သိလျှက်နဲ့ မှားသူတွေ.... မသိပဲမှားသူတွေ.... လူသားတွေရဲ့ အမှားတွေ.. အမှားပေါင်းများစွာ…အို.. ဒါတွေရေးရင်း စဉ်းစားမိတယ်။ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်နားထောင်ရာကနေ အတွေးများသွားတဲ့ ကျွန်မကရော တစုံတရာများ မှားယွင်းနေတာလား…
11/21/2006 07:00:00 AM
အချိန်မှီသာ ပြင်ဆင်ခွင့် မရှိခဲ့ရင် - မျိုးကြီး Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
ဒီနေ့ကျွန်မ မေမေရဲ့ မွေးနေ့ ...မေမေ့မွေးနေ့ မှာ မနားမှာရှိမနေနိုင်ပေမယ့် မေ့သမီး အဝေးကနေ ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်...ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ .. မေမေ..မိဘကျေးဇူးသိတတ်ပြီး၊ မိဘကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားနိုင်သော သားသမီးများကိုသာ မေမေ ပိုင်ဆိုင်ပြီးဖေဖေနဲ့တူတူ သက်ဆုံးတိုင် ပျော်ရွှင်ဖွယ် နိုင်ပါစေ။
ယူအက်စ်ကနေ တခြားနိုင်ငံတွေ (နိုင်ငံပေါင်း 50 ကျော်ကို ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော့ မပါပါဘူး) ကို free ခေါ်လို့ ရတဲ့ Site ပါ။ User အကောင့်တွေဘာတွေ ဘာမှ create လုပ်စရာမလို သလို ၊ Internet ကိုလည်း သုံးနေစရာမလို ပါဘူး။ ကြိုက်တဲ့ နေရာက နေ ဖုန်းခေါ်လို့ ရပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ဖုန်းလေး တစ်လုံးတော့ ရှိနေဖို့လိုတာပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းကနေ အဲ့ဒီ Site မှာ ပေးထားတဲ့ Ph no. ကို ဖုန်းခေါ်လိုက်ရင် အဲ့ဒီကနေပြီး ပြန်ခေါ်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြီးမှ ကိုယ်ခေါ်ချင်တဲ့ Ph no. ကို dial ပြီး ခေါ်လို့ ရတယ် ပြောထားတယ်။ သိသလောက်တော့ U.S က HandPhone ကိုင်တဲ့သူ တော်တော်များများ ယူထားတဲ့ Service Plan တွေက Incoming Call တွေ အတွက်ကိုပါ ပိုက်ဆံပေးရတယ်ဆိုတော Daytime( Peak Time) ဆို သူတို့ တွေ သုံးရတာ အဆင်ပြေမယ် မထင်ဘူး။ ဒီနိုင်ငံလို Incoming Call ဆို တစ်ပြားမှ မပေးရတဲ့ တိုင်းပြည်မှာသာ ဒီလို အလကား ဖုန်းခေါ်လို့ရတဲ့Service မျိုး သာရလို့ ကတော့ ဘယ်ပြောကောင်းလိုက်မလဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့ စီမှာ ဖုန်းအများစုက ဒီမှာလို မဟုတ်ပဲ Off-Peak Time တွေမှာ Incoming Call ရော၊ Outgoing Call ရော free ဆိုတော့ ညနေနဲ့ညဖက်တွေမှာ ဒီ Site က Ph no. ကိုသုံးပြီး Oversea Call ခေါ်ရင်တော့ အဆင်ပြေလောက်တယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော အလကားခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့။ကျွန်မတို့ဒီနိုင်ငံမှာ သုံးလို့မရပေမယ့် သုံးလို့ ရတယ်သူများ သုံးနိုင်အောင် မျှဝေလိုက်တာပါ။ ယူအက်စ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ ဒီ Site ကို သူတို့ ဆီက သတင်းစာတွေမှာလည်း ကြော်ငြာထားတာ တွေ့ တယ်လို့ ပြောပါတယ်။Source : FuturePhone.com
11/15/2006 11:25:00 AM
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပို့ ပေးခဲ့တာပါ။ဒီ အီးမေးရတာ ကြာတော့ကြာပါပြီ၊အောက်တိုဘာ၂၀၀၅ က ပို့ထားတာ။ ဒီနေ့ မှ အီးမေးဟောင်းတွေ ရှင်းရင်း နဲ့ပြန်ဖတ်မိတာပါ။ ပို့ ပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း STA ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်မ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲ ကြုံတွေ့နေရတာတွေ ဖြစ်ပြီး ၊ ပြောထားတဲ့ အချက်တွေ ကလည်း မှန်နေတာမို့ လို့ ၊ ဒါလေးကို ဖတ်မိတ်ိုင်း အနည်းဆုံးတော့ ပြုံးလိုက်မိတယ်။Top 10 replies by developers when their programs don't work:10. 'That's weird...'9. 'It's never done that before.'8. 'It worked yesterday.'7. 'You must have the wrong version.'6. 'It works, but it hasn't been tested.'5. 'Somebody must have changed my code.'4. 'Did you check foravirus?'3. 'Where were you when the program blew up?'2. 'Why do you want to do it that way?'and finally ...1. 'I thought I fixed that.'ကျွန်မလည်း ဒီထဲက အချက်တွေကို တော်တော်များများကို ပြောလေ့ရှိတယ်။ အဲ.. ဘာကြောင့် ဆိုတဲ့ reason မပေးခင် ကိုယ့်ဘက်ကသေချာအောင် ပြန်စဉ်းစားဖို့ လိုတယ်၊ reason ပေးပြီးရင်လည်း အဲ့ဒီ ပေးလိုက်တဲ့ reason က မှန်ကန် ကြောင်းကိုတော့ သက်သေပြနိုင်ဖို့လိုပြန်ရော။ မဟုတ်ရင် နောက်ပိုင်း ကိုယ်ပြောတဲ့စကား သူတို့မယုံဘူးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။Source : Email , C.E.O
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီနေ့ဈေးဆိုင်သွားရင်း တွေ့ လိုက်တဲ့ ချယ်ရီသီးလေးတွေ စားချင်စိတ်ပေါက်လာလို့ဒီပိုစ့်ကို တင်လိုက်တာပါ။ ကျွန်မ ရန်ကုန်မှာတုန်းက ချယ်ရီသီး တစ်ခါမှ မစားဘူးခဲ့ပါဘူး။ ကျောင်းသွားတက်တော့ အသီးလေးတွေ လှတာနဲ့ဝယ်စားဖြစ်ရာကနေ ကြိုက်သွားတာပါ။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ချယ်ရီသီးရဲ့ အရသာက ဘာမှလည်း မထူးခြားဘူးဆိုပြီး ထူးထူးခြားခြား မကြိုက်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ၀ယ်လာရင်တော့ လာစားပေးကြ ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ အမြဲနီးပါး ၀ယ်စားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ခုတော့ ဒီမှာ 100 g ကို4S$ နီးပါးပေးရတယ်လေ။ ၀ယ်စားဖို့ဘယ်လိုမှ မတန်ဘူးရှင့်။ မတန်ဘူးသာပြောတာပါ တခါတလေ စိတ်ကူးပေါက်ရင်တော့လည်း ၀ယ်စားမိလိုက်သေးတယ်။ ဈေးကြီးလို့အမြဲတော့ မစားနိုင်တော့ဘူး။နောက်ပြီး ဟိုမှာ အိမ်ရှေ့ တွေမှာ ချယ်ရီသီးပင်တွေ စိုက်ထားတာတွေ့ ရတယ်။ ကျွန်မက သစ်ပင်တွေကို စိတ်ဝင်စားတော့ သတိတော့ ထားမိလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အစကတော့ ဘာပင်တွေမှန်းမသိဘူးပေါ့။ တခါမှ မမြင်ဘူးတာ။ နောက်ပိုင်း အသီးတွေ ပင်လုံးပြွတ်အောင် သီးနေတာတွေ့ ရတော့ အရမ်း သဘောကျမိတယ်။ စိတ်ကူးမိတယ် တနေ့ နေ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးရှိရင် အိမ်ရှေ့ မှာဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်နောက်မှာဖြစ်ဖြစ် ချယ်ရီသီးပင် တစ်ပင်လောက်တော့ အနည်းဆုံး စိုက်ထားဦးမယ်လို့ ။ ခုထိတော့ စိုက်နိုင်ဖို့လမ်းမမြင်သေးပါဘူး။ အဲ့ဒီ အပင်တွေ စိုက်ဖို့သူနဲ့ကိုက်တဲ့ ရာသီဥတု ရှိတဲ့ နေရာမှာ နေဖြစ်ခဲ့ရင့် တစ်ပင်လောက်တော့ အနည်းဆုံး စိုက်ဖြစ်အောင်စိုက်ကြည့်ဦးမယ်။ စိတ်ကူးတွေပေါ့လေ။ချယ်ရီသီးမှာ အမျိုးအစားအများပြားရှိပါတယ်။ ကျွန်မသိသလောက်တော့ Bing, Lapin, Montmorency, Rainier, Stella, Sweetheart နဲ့Van တို့ ပါ။ အဲ့ဒီထဲက Bing နဲ့Stella အမျိုး အစား ချယ်ရီသီးတွေကို ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ အဲ့ဒီ အသီးတွေက လှလည်းလှ ချိုလည်းချို ဒီတိုင်းစားလို့ လည်း ကောင်းတယ်လေ။ ချယ်ရီသီးက ချီုတယ်ဆိုပေမယ့် အမျိုးအစားတိုင်းချိုတဲ့ အရသာရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့ချယ်ရီသီးတွေက ချဉ်တဲ့ အရသာရှိပါတယ်။ Montmorency ဆို ချဉ်တဲ့ အရသာရှိပြီး ဟင်းချက်တာနဲ့pie လုပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ အသုံးများပါတယ်။ဒီမှာ ကျွန်မ စားချင်တဲ့ ချယ်ရီသီးတွေ….ဒါက ချယ်ရီပွင့်တွေ ....ချယ်ရီပင်၊ ချယ်ရီပွင့်နဲ့ချယ်ရီသီးတွေ အကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ wiki - cherry မှာ ဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ပုံလေးတွေလည်း ပါတယ်။
Title : If You are Not The OneArtist : Daniel BedingfieldSong : Listen and DownloadLyrics : www.sing365.com If you're not the one then why does my soul feel glad today?If you're not the one then why does my hand fit yours this way?If you are not mine then why does your heart return my call?If you are not mine would I have the strength to stand at all?I never know what the future bringsBut I know you are here with me nowWe'll make it throughAnd I hope you are the one I share my life withI don't wannna run away but I can't take it, I don't understandIf I'm not made for you then why does my heart tell me that I am?Is there any way that I can stay in your arms?If I don't need you then why am I crying on my bed?If I don't need you then why does your name resound in my head?If you're not for me then why does this distance maim my life?If you're not for me then why do I dream of you as my wife?I don't know why you're so far awayBut I know that this much is trueWe'll make it throughAnd I hope you are the one I share my life withAnd I wish that you could be the one I die withAnd I'm praying you're the one I build my home withI hope I love you all my lifeI don't wanna run away but I can't take it, I don't understandIf I'm not made for you then why does my heart tell me that I amIs there any way that I can stay in your arms?'Cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breath awayAnd I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today'Cause I love you, whether it's wrong or rightAnd though I can't be with you tonightYou know my heart is by your sideI don’t wanna run away but I can’t take it, I don’t understandIf I’m not made for you then why does my heart tell me that I amIs there any way that I can stay in your arms?
11/11/2006 02:56:00 PM
ကျွန်မ ရဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက် ဟိုရက်ပိုင်းက သူ thesis အတွက် visio ကို သုံးပြီး ပုံတွေဆွဲနေရတယ်ဆိုတာ ကြားပြီးထဲက Drawing Tools တွေ အကြာင်း တွေးနေမိခဲ့တာပါ။ ရှေ့ က online file convector ပိုစ့်ကိုရေးရင်နဲ့online drawing tools တွေ လည်းရှိမှာပဲလို့ တွေးမိလို့ လိုက်ရှာကြည့်တော့1. CumulateLabs2. Gliffyကို တွေ့ တယ်။ တစ်ခြား ကျွန်မ မတွေ့ သေးတဲ့ Free Drawing Online Tools တွေလည်း ရှိချင်ရှိမှာပါ။ သိသူများ မျှဝေ စေချင်ပါတယ်။ ခုတော့ ကျွန်မတွေ့ လိုက်တာလေးတွေအကြောင်း ဖတ်မိ၊ စမ်းမိသလောက် ရေးထားလိုက်ဦးမယ်။ CumulateLabs - Click here to Watch the CumulateLabs video at YouTubeuser account တွေဘာတွေနဲ့login လုပ်စရာမလိုပါဘူး။draw ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ပုံစဆွဲလို့ ရပါပြီ။သူ့ မှာ two types of diagrams (basic shape နဲ့flow chart) ဆိုပြီး ပုံစံ နှစ်မျိုး ရွေးလို့ ရပါတယ်။ကိုယ်ဆွဲချင်တဲ့ shape (ပုံမှာ) click လုပ်၊ ပြီးရင် drawing window မှာ သွားပြီး click လုပ် ပြီး၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ size ရအောင် drag လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ဆွဲပြီးသား ပုံတွေကို save ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်ရင် JPEG, PNG, SVG, PDF (alpha) and MMD/FMD ပုံစံတွေနဲ့user တွေရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ သိမ်းလို့ ရ နေတယ်။သူရဲ့ site မှာတော့ သိမ်းလို့ မရသေးပါဘူး။ကိုယ့် ကွန်ပြူတာထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ files တွေကို ပြန်ဖွင့်ပြီး edit လုပ်လို့ရပါတယ်။ ခုလက်ရှိတော့ MMD/FMD format နဲ့သိမ်းထားတာတွေကိုပဲ ပြန် edit လုပ်လို့ ရပါသေးတယ်။MMD files can only be opened and modified in IE လို့ ရေးထားတာတွေ့ ပေမယ့် ကျွန်မ Firefox သုံးပြီး စမ်းကြည့်တာတော့ အဆင်ပြေနေတယ်။Opensource ဖြစ်လို့source ကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ ရပါတယ်။ Click here to Download Source Codeအပေါ်က အချက်တွေက ခုလက်ရှိရနေတဲ့ feature တွေပါ။ ကျွန်မ အထင်တော့ CumulateLabs က opensource ဆိုတော့ ခုချိန်မှာ လုပ်နိုင်တာတွေ သိပ်မများသေးပေမယ့် နောက်ပိုင်း ဒီထက်အများကြီး ပိုကောင်းလာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။Gliffy - Click here to Watch the Gliffy video demoflash ကိုသုံးထားတဲ့ online drawing tools ပါ။သုံးမယ်ဆို user account နဲ့login လုပ်ပြီးမှ သာ သုံးလို့ ရပါတယ်။free user account create လုပ်လို့ ရပါတယ်။သူ့ မှာ six types of diagrams (Flow Chart, UML, Network , User Interface, Floor Plan နဲ့Basic Shapes) ဆိုပြီး ပုံစံ ခြောက်မျိုး ရွေးလို့ ရပါတယ်။ဒီမှာက ဆွဲပြီးပုံတွေကို save လုပ်ထားလို ရပါတယ် ။ gliffy မှာက save လုပ်ထားတဲ့ file တွေကို သူရဲ့ server မှာ သိမ်းထားတာပါ။ ကိုယ့် computer မှာ သိမ်ချင်တယ်ဆိုရင် သူ့ စီမှာ Export လုပ်တဲ့ feature ပါပါတယ်။Export as SVG, Export as JPEG နဲ့Export as PNG ဆိုပြီး type သုံးမျိုးနဲ့သိမ်းလို့ ရပါတယ်။Edit လုပ်တာကတော့ သူရဲ့ server မှာ သိမ်းထားတဲ့ file တွေကိုပဲ edit ပြန်လုပ်လို့ ရပြီး export လုပ်ထားတာတွေကိုတော့ ပြန် edit လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး။Gliffy မှာ ထူးခြားတဲ့ feature ကတော့ ကိုယ့်ဆွဲထားတဲ့ ပုံတွေကို သူများနဲ့share လုပ်နိုင်တာပါပဲ။Share မှာ type နှစ်မျိုးနဲ့share လုပ်နိုင်ပါတယ်။၁။ Collaborate - ကို share ပေးချင်တဲ့ သူရဲ့ email address ကိုထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့တစ်ဖက်လူက ကိုယ့်ပုံကို ကြည့်ရုံမကဘူး edit ပါလုပ်နိုင်သွားပါတယ်။၂။ Publish to internet - ကိုယ်ဆွဲထားတဲ့ ပုံကို wiki, blog နဲ့တစ်ခြား website တွေမှာ ပြလို့ရအောင် အတွက် ပါတယ်။CumulateLabs နဲ့ယှဉ်ရင် Gliffy မှာလုပ်လို့ ရတယ် feature တွေပိုများပြီး ပိုကောင်းနေပါတယ်။ Galiffy က ခုချိန်မှာ free ဖြစ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းကြရင်တော့Free user with limited feature နဲ့ Business User with premium features လို့ ခွဲမယ်လို့ပြောထားတာကို Dliffy pricing plans မှာ ပြောထားတာကို ဖတ်ရပါတယ်။Source : Digg , Dliffy , CumulateLabs
file တွေကို ဘယ် software မှ download လုပ်စရာမလိုပဲ convert လုပ်လို့ ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ ZamZar ဆိုတဲ့ website ကိုသုံးပြီး အဲ့ဒီ site ကနေ convert လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ရသလောက်ဆိုရင် file type တော်တော်များများကို ပြောင်းလို့ ရတယ်လို့အဲ့ဒီ site မှာရေးထားပါတယ်။ အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ဒီမှာ မှတ်ထားလိုက်တာပါ။ပြောင်းလို့ ရတဲ့ file format list ပါ။ ဒီ လင့်ခ့် ConversionTypes မှာ ကြည့်ရင်လည်း ရပါတယ်။ဒီမှာက ဘယ်လို ပြောင်းရမလည်း ဆိုတာကို ရှင်းပြထားတာပါ။convert မလုပ်ခင်မှာ အဲ့ဒီ site က Terms of Service for Zamzarဆိုတာလည်းကို အရင် ဖတ်ကြည့်ကြပါ။Source : YouNeed2See , Zamzar
တနေ့ တနေ့ မနက်ဆို အိပ်ရာထ၊ရေလေးချိုးပြီး အလုပ်သွား၊အလုပ်ရောက်ပြီဆို အိတ်ကလေး ဘေးချ၊ကွန်ပြူတာလေးဖွင့် အွန်လိုင်းလေးဝင်၊သတင်းတွေဖတ်၊ ဘလောခ့်တွေဖတ်၊ ဖိုရမ်တွေဖတ်၊ဟိုရေး ဒီရေး၊ ရေးချင်တာတွေ လျှောက်ရေး၊နည်းနည်း စိတ်ကြည်လင်ရင် အွန်လိုင်းက ကျူတိုရီရယ် လေးတွေ လိုက်ကြည့်၊နေ့ လည်စာ စားချိန်ရောက်ပြီဆို တစ်ယောက်တည်း နေ့ လည်စာလေး သွားစား၊စားပြီး ပြန်လာတော့ အပေါ်မှာပြောထားတာတွေ ပြန်လုပ်ရင်း ညနေအလုပ်ဆင်းမယ့် အချိန်ကို စောင့်၊ညနေ ၆နာရီလည်း ထိုးရော အိတ်ကလေး ကောက်လွယ်ပြီး အိမ်ပြန်၊အိမ်ရောက်ပြီဆို ထမင်းလေးချက် ညစာလေးစား၊သီချင်းလေးနားထောင် ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လေးလုပ်၊ပြီးတော့ ရေလေးချိုးပြီး အိပ်ရာဝင်။ဒါပါပဲ။အလုပ်သစ်မှာ ဘယ်လိုလဲ၊ အဆင်ပြေလား၊ ဂရုတစိုက် မေးဖေါ်ရသော သူငယ်ချင်များ၊ ဒီပိုစ့်လေးဖတ်ပြီးရင် အလုပ်သစ်က ဘယ်လိုလည်း ဆိုတာ သိလောက်ရောပေါ့။ ဘ၀ကြီးက အေးချမ်းနေလိုက်တာလို့ခုချိန်မှာ ပြောနိုင်ပေမယ့် ဒီအတိုင်းသာ ဆက်နေသွားရင် အပျင်းကြီးလာပြီး အသက်တို လောက်တယ်။ နောက်ပြီး သိပ်လည်း မငြီးရဲဘူး။ ဒီလောက်အားနေတာ တမျိုးကြီးပဲ။ ခုချိန်မှာ ဘာမှ လုပ်စရာမရှိ၊ အားနေသလောက် နောင်များမှာ အလုပ်တွေ သေလောက်အောင်ရှုပ်လာမှာ စိုးရိမ်နေရပါတယ်။
အောက်မှာ ရေးထားတဲ့ သတင်းကို အသေးစိတ်ဖတ်ပြီးနောက် တစ်ခု ထပ်ပြီး စဉ်းစားနေမိပြန်တယ်။ (အားနေတာနဲ့လုပ်စရာမရှိ လျှောက်တွေးနေတာလို့ထင်လိုကထင်နိုင်၊ မနာလို ဖြစ်လိုက မနာလိုဖြစ်နိုင် ပါတယ်။) website သန်း ၁၀၀ ကျော်မှာ သန်း ၅၀ လောက်ပဲ active ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့၊ ကျန်တဲ့ site တွေက ဘာဖြစ်နေလဲ။ ဒီမှာ ဖြစ်နိုင်တာ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ လူတွေက သူတို့ လို ချင်တဲ့ name တွေပဲ ၀ယ်ထားပြီး site တွေကို build မလုပ်ကြသေးပဲ နေမှာပေါ့။ ဘာလို site တွေကို internet မှာ active ဖြစ်အောင်မလုပ်ချင်သေးပဲနဲ့name တွေ ကြိုဝယ်ထားတာလဲ။ ရှင်းပါတယ်။ ခုချိန်မှာ website မလုပ်နိုင်၊ မလုပ်ချင်သေးပေမယ့် တစ်နေ့ နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ခေတ်နဲ့အညီ၊ အမှီလိုက်ပြီး website တွေလုပ်တော့မယ်ဆို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နာမည်မရမှာ စိုးရိမ်လို့ ပေါ့။ဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကြုံတုန်းလေး ဆက်စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်။ ကိုယ်ပိုင် web site name (domain name) ကို ၀ယ်တော့မယ်ဆို ဘယ်လို စဉ်းစားပြီး ၀ယ်ကြသလဲ။ company တွေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ သူတို့company ရဲ့ နာမည်နဲ့ ပဲ ၀ယ်ကြမှာပေါ့။ company နာမည်က တစ်ခြား၊ web site နာမည်က တစ်ခြား ဖြစ်နေတာမျိုးက ရှားပါတယ်။ ရှိတော့ရှိတယ်၊ ရှားတယ်ပေါ့။ ဒါရေးရင်မှ သတိထားမိတယ်။ ကျွန်မ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ company နာမည် နဲ့web site address မတူပါလား။ မတူပေမယ့် ဆက်စပ်မှု့ တော့ရှိပါတယ်။ web site address က ဒီcompany ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပဲ။ ဒါတွေထားပါ။ ခုနက ဟာကို ဆက်တွေးရမယ်။Name တွေ ကြိုဝယ်ရာမှာ Company မဟုတ်သေးတဲ့ ဒါပေမယ့် နောင်တစ်ချိန်ချိန်မှာ တစ်ခုခုလုပ်မယ် ရည်ရွယ်သူများက general ကျတဲ့ နာမည်မျိုး၊ လူသိများတဲ့ နာမည်မျိုး ၊ ဒါမှ မဟုတ် ငါ့ company ဖွင့်ရင် ဘာပေးမယ်ဆိုပြီး တွေးထားတဲ့ နာမည် မျိုးတွေကို ၀ယ်ကြမယ် ထင်တယ်။ personal အတွက်ပဲ ရည်ရွယ်သူ တွေကရော။ အင်း ကြုံဘူး၊ တွေ့ ဘူးသလောက် အမြင်အရ ပြောရမယ် ဆိုရင်ကတော့ personal site တွေလုပ်မယ့်သူတွေက နာမည်လှလှလေးတွေ စဉ်းစားပြီး ၀ယ်ကြတယ်၊ ၀ယ်ထားကြတယ်ပေါ့။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်း တစ်ချို့နာမည်လှလှနဲ့domain name လေးတွေ ၀ယ်ထားတာတွေ့ တယ်။ (ကျွန်မကတော့ သူတို့ တွေလို နာမည်လှလှ လေးတွေ မစဉ်းစားတတ်ပါဘူး။) တစ်ချို့ ကျတော့လည်း personal အတွက်ဆိုတောု့ သူတို့နာမည်နဲ့ ပဲ website လုပ်မယ်ဆိုပြီး domain name တွေဝယ် ထားကြတယ်။ ဒီလို ကိုယ့်နာမည်နဲ့ ကို domain name ကြိုဝယ်ထားသူများကို အမျှော်အမြင်ကြီးပြီး၊ နောင်တခေတ်မှာ ထင်ရှားလာနိုင်တဲ့ သူတွေလို့ပြောလို့ ရမယ် ထင်တယ်။ ကျွန်မ အထင်ပေါ့လေ။ ကျွန်မ ဘာလို့အဲ့လို ထင်လဲ။ ရှင်းပါတယ်။ မသိဘူးဆို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ဘယ်လို လူတွေက သူတို့ နာမည်တွေနဲ့site တွေလို ရှိဖို့ လို မလဲ။ ကျွန်မတို့ုလို သာမန်လူတွေက website တစ်ခုရှိဖို့လိုတောင်မှ ကြိုက်တဲ့ နာမည်ပေး အရေးမကြီးလောက်ပေမယ့် ထင်ရှား၊ ကျော်ကြား လူသိများတဲ့ သူတွေ မှာတော့ သူတို့ကိုယ်ပိုင် နာမည်တွေနဲ့web siteတွေ ရှိကိုရှိဖို့ လိုမှာ သေချာပါတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူတို့ ကို လူတိုင်းက စိတ်ဝင်စားကြပြီး၊ သူတို့အကြောင်ကို သိချင်သူတွေ သူတို့အကြောင်းတွေကို internet မှာ ရှာဖွေရာမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ရှာဖွေနိုင်အောင်က သူတို့ နာမည်တွေကို သုံးပြီး site တွေ လုပ်ထားမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ (မလို ဘူးမပြောပါနဲ့ ။ ဒီခေတ်က ဟိုခေတ်တွေကလို စာကြည့်တိုက်သွား၊ သိ,သူတွေစီသွားပြီး အကြောင်းအရာတွေ စုနေဖို မလိုပဲ၊ internet မှာ enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ယုံနဲ့သိချင်တာတွေ အကုန်သိနိုင်၊ လိုချင်တာတွေ အကုန်ရနိုင်တဲ့ ခေတ်ရောက်နေပြီဆိုတော့ လိုတယ်လေ။) လိုက်ရှာကြည့်ပါ။ ခုခေတ် နာမည်ကြီးနေတဲ့ သူတွေတိုင်းမှာ သူတို နာမည်တွေနဲ့ကိုယ်ပိုင် web site တွေရှိပါတယ်။ကျွန်မ မှာတော့ ကိုယ့်နာမည်နဲ့website မရှိ၊ domain ၀ယ်ထားတာလဲ မရှိပါဘူး။ ကျွန်မကို အမျှော်အမြင် မရှိတဲ့ လူလို့ ယူဆလိုက ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မ စိတ်မဆိုးပါဘူး။ :D တကယ်တော့ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ ထူခြား လူသိများ လာမယ့် သူလို့မထင်တဲ့ အတွက် မလိုအပ်ဘူးထင်လို ကိုယ့်နာမည်နဲ့ ကိုယ် မ၀ယ်ဖြစ်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ထဲမှာတော့ နောင်တခေတ်မှာ နာမည်ကြီးလာမယ့် အမျှော်အမြင်ကြီးသူတွေ တော်တော်မျာများ ရှိ ကြောင်း ကြုံတုန်းလေး ပြောလိုက်ပါဦးမယ်။ ဘယ်သူတွေလည်း သိချင်ရင် တော့…… ပြောပြမယ်။ ခုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်နေလို့ ပါ။ ပြန်ပါတော့မယ်။ ကောင်းသော ညနေခင်းပါ။
11/02/2006 09:17:00 PM
ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို သိကြပါသလား။ ခုချိန်မှာ internet မှာ web site တွေ ဘယ်လောက်များရှိနေပြီလဲ။ကျွန်မ သိသလောက်၊ ကျွန်မ internet ဆိုတာကို စသုံးဘူးတဲ့ ၂၀၀၀ က နဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ရင်တောင်မှ တစ်နေ့တစ်နေ့ တိုးလာလိုက်တဲ့ မြန်မာလို ရေးတဲ့ web site တွေက တင် မနည်းပါဘူး။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံလို IT သိပ်မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ နိုင်ငံ က ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ မြန်မာလို ရေးတဲ့ site၊ English လို မြန်မာ နိုင်ငံ အကြောင်းရေးတဲ့ site တွေတောင် ဒီလောက်များလာတယ်ဆို ၊ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေက English လိုရေးတဲ့၊ ကျွန်မ ကြားဘူးရုံ ကြားဘူးပြီး နားမလည်တဲ့ တစ်ခြား ဘာသာ စကားတွေ၊ ကျွန်မ လုံးဝ ကို မကြားဘူးတဲ့ ဘာသာစကားတွေနဲ့ရေးတဲ့ website တွေ က အရမ်း တိုးပွါး များပြားလာမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ကဲ တိုးလာတာတော့ သေချာပြီ၊ ဒါဆို ခုဆို အင်တာနက်မှာ တင်ထားတဲ့ website ပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ။ ၁ သ်ိန်းလား၊ ၁ သန်းလား၊ သန်း ၆၀ လား။ဒီနေ့ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ သတင်းအရဆို အင်တာနက်မှာ ရှိတဲ့ site ပေါင်း က သန်း ၁၀၀ ကျော်သွားပါပြီတဲ့။ ဒီအရေအတွက်ဟာ netscraft ရဲ့ survey အရသိရတာပါလို့ ဆိုထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ သတင်ထဲမှာပဲ ဒီနေ့ ရှိနေတဲ့ web site အရေအတွက်ဟာ ၂၀၀၄ ကရှိနေတဲ့ web site အရေအတွက် သန်း ၅၀ ရဲ့ ၂ ဆ ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောထား ပြန်ပါသေးတယ်။ ၂ နှစ် အတွင်း ၂ဆ တက်လာတယ်ဆိုတာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ဒါပေမယ့် ဒီ site တွေအကုန်လုံး Internet ပေါ်မှာ active ဖြစ်နေသေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ active ဖြစ်နေတဲ့ အရေအတွက်က သန်း ၅၀ လောက်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီ site ရဲ့ survey အရ သိရပြန်တယ်။ အဲ့ဒီ site တွေ အကုန်လုံးသာ active ဖြစ်သွားမယ်ဆို wow… internet ကြီးမှာ ဘယ်လောက်တောင် website တွေ ပွထပြီး ရှုပ်ရှက်ခက်၊ ဖတ်စရာ မကုန်နိုင်အောင် ဖြစ်နေ လိုက်မလဲ။ ခုလောက်တောင်မှ Internet မှာ ဟိုဖတ်ဒီဖတ် လိုက်လုပ်ဖို့အချိန်က မလောက်ဖြစ်နေတာ။ ပြီးတော့ နောက်ဆို လူတိုင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်း၊ လုပ်ငန်းတိုင်း ကိုယ်ပိုင် website ရှိပြီး၊ မရှိရင် ခေတ်မမှီ ဘူးပြောရတော့မယ်။ ဟို ဟာသ ကာတွန်းလေး ထဲကလို ကိုယ်ပိုင် website မရှိသေးလို့website လုပ်ဖို့ ပါဆိုပြီ့း ပိုက်ဆံလိုက်တောင်းနေရမလို့ ဖြစ်နေတော့မှာပဲ။Source : NetCraft
11/02/2006 03:48:00 PM
ဘာလိုလို နဲ့မျှော်သူတို့အလိုကျ နိုဝင်လာလ ရောက်ခဲ့ ပြန်ပြီ။ ၁၂ လရှိတဲ့ အထဲက ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံး လတွေကို ပြောပါဆို နိုဝင်ဘာ နဲ့ဒီဇင်ဘာ က ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေပြီး၊ အောက်တိုဘာ နဲ့စက်တင်ဘာ က နောက်က လိုက်နေတယ်လို့ပြောရမယ် ထင်တယ်။ နောက်လ ကုန်ရင် ၂၀၀၆ ကုန်လို့၂၀၀၇ ရောက်ပြန်တော့မယ်။ နှစ်ဟောင်းကုန်လို့နှစ်သစ်စတော့မယ်။ တစ်နှစ် တစ်နှစ် ကုန်တာကလည်း မြန်လိုက်တာလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်။ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခုချိန်ဆို ဒီနှစ်အတွင်း ပြီးအောင်လုပ်မယ် ကြံထားတာတွေ ပြီးလုပြီးခင် ဖြစ်နေသင့်ပြီ။ မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လည်း ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် ပြန်စဉ်းစားပြီး တစ်ခုခုတော့ လုပ်သင့်နေပြီး ထင်တယ်။ plan ရှိ၊ အကြံ ရှိနေသူများကို သတိပေး စကားလေး ပြောချင်တာပါ။အားလုံး ဒီ နိုဝင်ဘာလမှာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော အချိန်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ ကျွန်မလည်း ပျော်ရွှင် နိုင်ပါစေ။ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးလည်း ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ သက်ရှိ သတ္တ၀ါများ အားလုံး အစစ အရာရာ အဆင်ပြေ ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင် နိုင်ကြပါစေ။Happy NovemberSong for November : Guns n' Rose - November Rain , Lyrics